Soso-kevitra manampy. Bali " Journey-Assist- Fitsangatsanganana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Torohevitra mahasoa Bali
Torohevitra alohan'ny fitsangatsanganana any Bali
Fitsipika momba ny fitondran-tena any Bali
Voarara any Bali
Vanim-potoana any Bali
Fitaterana sy fifamoivoizana any Bali
Aroso ny hanovana vola manokana amin'ny fifanakalozana fifanakalozana ofisialy (miaraka amin'ny soratra soratra Exchange Exchange ary efitrano misaraka), satria mitombo ny hosoka amin'ny mpivarotra amoron-dàlana. Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny nosy Bali dia tsy raisina ho takalony ny volafotsy vola dolara amerikana talohan'izay tamin'ny taona 2006. Ny hafa kosa dia miankina amin'ny antokom-bolam-bavony: miova ny volafotsy kely amin'ny vidiny mora kokoa. Betsaka ny ATM any Bali, na izany aza, tranga maro momba ny hosoka ihany koa no mifandraika amin'izy ireo, noho izany dia asaina hanamboarana vola fotsiny amin'ireo ATM ireo izay hita eo amin'ny tranon'ny banky (BCA, Mandiri, sns).
Ny vola Indonezia dia ny Rupee Indoneziana. Eo am-pielezana izao dia misy taratasim-bola misy antokon'olona 1, 000, 2, 000, 5, 000 ary 10 000 rupees.
Tena kivy tokoa ny fifanakalozana fifanakalozana lehibe amin'ny seranam-piaramanidina, satria ny tahan'ny fifanakalozana eto an-toerana dia tsy misy tombony noho ny an'ny tompon'andraikitra ofisialy hafa manerana ny nosy.
Tokony ho tsaroana ihany koa fa vola be dia be - vola maherin'ny 100 tapitrisa (000 $ eo ho eo) avy amin'ny olona iray no tsy maintsy ambara.
Amin'ny antsipiriany momba ny fifanakalozana vola amin'ny Bali, fifanakalozana ary banky, azonao vakiana HERE
Ity ambany ity dia fifanakalozana converter feno. Mifandraika foana ny làlana ao ary afaka mifantoka amin'izany ianao.
Eo amin'ny fidirana amin'ny tempoly dia tokony hanao akanjo manarona ny soroka ianao sy ny lohalika. Raha hitsidika ireo Tempolin'i Bali marobe dia novidiana ny tapakila iray, ny vidiny izay ahitana ny fanofaanana sarong. Ity dia akanjo nentin-drazana nentim-paharazana amin'ny endrika zavatra vita amin'ny fehikibo, ary avy eo mifatotra fehikibo. Heverina ho tsy manam-petra fa mamakivaky ny toerana eo anelanelan'ny alitara sy ny mpivavaka ilay tempoly, na mijanona eo akaikin'ny mpivavaka amin'ny sisiny ihany. Voarara ny hiditra ny tempoly amin'ny andro manakiana. Tsy ekena ihany koa ny hoe nisy nandritra ny lanonana ara-pivavahana iray ambonin'ireo mpitondra fivavahana sy fanomezana natolotra ho an'ireo andriamanitra. Raha mitsidika ny tempoly ianao dia tokony mamela karazana fanomezana vitsivitsy. Ao amin'ny ampahany amin'ny tempoly, na izany aza, dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny tapakila mihitsy.
Ny fitsipi-pitondran-tena eo an-toerana dia tsy mamela ny hikasika ny lohan'ny olona, ​​satria ity toerana ity dia raisina ho masina.
Ny fiarahabana, ny fividianana vola ary ny zavatra hafa avy amin'ny tanan'ny olona hafa dia ilain'ny tanana havanana fotsiny, satria ny Baliay dia mihevitra ny maloto havia.
Ny fandehanana an-dalambe dia tokony ho ao anaty akanjo mihidy. Ny akanjo milomano sy ny akanjo ivelany hafa dia tsy afaka ny mandeha amin'ny tora-pasika ihany. Eo imasom-bahoaka dia mila manaraka ny fomba fanao mifehy ianao, miresaka tsy mangina, fa tsy hampiseho ny fihetseham-ponao ampahibemaso. Indrindra indrindra, ny famihina sy ny oroka amin'ny toerana ho an'ny besinimaro dia tsy ekena velively.
Ny vehivavy manao kiraro any Bali dia tena kivy tanteraka, na dia tsy jeren'ny mpizaha tany aza izany.
Ny antsipirihany momba ny kolontsaina sy ny filozofia any Bali, azonao vakiana HERE
Tsy ny toeram-pivarotana lehibe sy ny tsena lehibe rehetra no mandray karatra fangatahana trosa. Noho izany antony izany dia tsara kokoa ny mandeha miantsena miaraka amina vola amin'ny vola ampy. Tokony handeha amin'ny bazary ianao miaraka amina volavolan-dalàna be dia be, izay ahafahanao mandoa mpivarotra tsy misy olana.
Ireo fivarotana lehibe dia miasa manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 21. Na izany aza, misy fivarotana rojo vy XNUMX ora, ohatra, Minimart sy Circle K.
Mila mividy zavatra any Bali ianao nefa tsy misy mpitari-dalana. Na izany aza, ny tompon'ny tranombarotra dia mandoa mpitari-dalana ho an'ireo mpividy mpizaha tany izay mitarika azy ireo, fa ny vidin'ny mpivarotra toy izany dia avo be. Amin'ny fanaovana ny fivarotanao manokana dia afaka manangona vola be ianao.
Ny antsipirihany momba ny fivarotana sy ny tsenan'i Bali, momba ny fiantsenana, fiandrianana sy ny maro hafa dia azo vakiana HERE
Voarara ao Bali!
Ny zava-mahadomelina dia tsy tokony ampiasaina, mividy ary zaraina any Indonesia, satria ny sazy mahery vaika no atahorana eto. Ilaina ny miampita tsara ny làlana, satria avo ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana. Tsy afaka milomano rehefa milomano lavitra amin'ny morontsiraka, satria misy mahery mahery avy any amin'ny morontsiraka mankany amin'ny ranomasina. Amin'ireo misotro zava-pisotro misy alikaola eto an-toerana, dia tsy maintsy mividy afa-tsy izay vokarina any amin'ny orinasa, fa tsy ao an-trano, ary mividy azy ireo afa-tsy any amin'ny fivarotana lehibe ihany, satria tsy fahita eto ny trangan'ny fanapoizinana methanol.
Na ahoana na ahoana, dia tokony hisotro rano miloko rano any Bali ianao, ary ampiasao ho an'ny fahadiovana manokana sy ny fanasana sakafo. Noho izany, azo atao ny mampiasa rano be tavoahangy amin'ny fivarotana. Amin'ny tranga tafahoatra dia afaka mahandro rano avy amin'ny famatsian-drano ianao.
Betsaka koa ireo voarara tsy haondrana any amin’ny nosy. Izay azo vakiana amin'ny an-tsipiriany HERE.
Fanampiana ara-pitsaboana any Bali
Any Bali, misy ny toeram-pitsaboana tsy miankina, toa an'i Siloam, Ibu Kasih ary ny sasany, izay manome fitsaboana avo lenta, nefa lafo be. Ao koa ireo toeram-pitsaboana aretin-tsaina tena tsara (tsy mora ihany koa). Tena atolotry ny hoe hividy fiantohana alohan'ny hanidina eto ianao. Ilainao koa ny manamarina ny orinasa izay hahafahanao miantoka amin'ny toeram-pitsaboana ao Bali afaka mifandray aminy raha misy olana ara-pitsaboana. Rehefa avy nangataka fanampiana ianao dia ilaina ny mitahiry ny taratasim-panadinam-pitsaboana sy ny tako. Tsy ilaina ny fanaovana vaksiny manokana alohan'ny dianany any Bali.
Antsipiriany momba ny fitsaboana any Bali, momba ny hopitaly sy ny fivarotam-panafody HERE
Toetany sy toetrandro any Bali
Rehefa mitsidika morontsiraka Bali, dia tokony ho tsaroana fa 8 degre ihany no hita any avaratry ny ekoatera. Noho izany, dia matanjaka tokoa ny taratry ny masoandro. Tsara kokoa ny tsy mitsidika ny tora-pasika amin'ny 11 ka hatramin'ny 15 ora. Mila mampiasa sunscreens izay misy sivana UVB avo be ianao, raha mandinika ny karazana hoditra ary misotro rano betsaka be. Amin'ny rindran-dranomasina, dia hita any amoron-dranomasina any Bali izay misy fanjaitra misy poizina izay misy poizina izay miteraka fanaintainana mafy amin'ireo izay tsy nahy nandeha taminy. Milentika ny toetrandro eto, fa miaraka amin'izay koa. Tsara kokoa ny mitafy akanjo maivana vita amin'ny landihazo na rongony fotsy. Raha mitsangantsangana any an-tendrombohitra ianao dia tokony handray palitao sy / na akanjo mafana mafana.
Amin'ny antsipiriany momba ny vanim-potoana, toetr'andro, toetr'andro ankehitriny any Bali HERE
Eto ambany no ahitanao ny toetrandro ankehitriny any Bali. Widget azo ampiharina. Safidio ny sosona mahaliana anao. Rivotra, onja, hafanana, varatra ary ny maro hafa.
Fitaterana any Bali
Ny fitateram-bahoaka iraisana any Bali dia minibus kely antsoina hoe bemo. Misy orinasa minibus maromaro toy izany miasa ao amin'ny nosy. Andininy momba fitateram-bahoaka bali HERE
Ny fitaterana olona mahazatra indrindra eo amin'ny mponina dia ny moped sy ny scooter. Betsaka ny orinasa manofa fiara sy moto any Bali. Antsipirihany momba ny fanofana bisikileta HERE, ary momba ny fanofa fiara HERE
Amin'ny làlan-kaleha mivoatra be dia be, ny lalana dia azo antsoina hoe tsy azo tanterahina, fa amin'ny làlan'ny firenena kosa dia tsy mahafa-po. Vitsy ny famantarana an-dàlana, hany ka tsy dia mahafinaritra noho ny any amin'ny firenena tandrefana ny mitondra fiara any Bali. Ny fivezivezena eny an-dàlana dia malefaka tsy misy afa-tsy amin'ny toeran'ny mpizahantany vitsivitsy monja: Denpasar-Sanur, Denpasar-Kuta, Denpasar-Klunkung. Amin'ny an-tsipiriany momba ny fitsipiky ny fifamoivoizana sy ny endri-pifamoivoizana any Bali HERE
Ary etsy ambany, ho an'ny olona iray, ny taxi-be na ny serivisy famindrana na mankany amin'ny seranam-piaramanidina avy any Kiwitaxi dia mety ho ilaina. Azo antoka ny vidiny ary mahatsiaro ho mendrika hatrany ny serivisy.
Famindrana an-tserasera na famandrihana ny taxi ao Bali
Ireto ambany ireto ny telo tonta malaza iray eto ambonin'ny tany hikarohana hotely na trano.
Ilaina ny mandamina fiantohana fitsangatsanganana, izay handrakotra fitsaboana amin'ny hopitaly iraisam-pirenena. Ny nosy Bali dia tsy ao anatin'ny faritra malaria, noho izany dia tsy ilaina ny fanaovana vaksiny raha toa ka ny fikasana dia hasaina hamerana ihany amin'ny faritanin'i Bali. Izahay koa dia manoro hevitra anao aloha mba hifandraisanao amin'ny orinasam-piantohana mba hahitana hoe toeram-pitsaboana Bali izay azonao ifandraisana.
Mety hahita lahatsoratra mahasoa ianao:
Amin'ny antsipiriany momba ny serasera finday sy Internet any Bali HERE